Ilebuli Factory - China Labeling Abakhiqizi, abahlinzeki
Umshini Welebula Wokufaka Umbhalo we-Round Round
Umshini wokulebula uyithuluzi lokunamathela imiqulu yamalebula wephepha wokuzihlanganisa (iphepha noma ucwecwe wensimbi) kuma-PCB, imikhiqizo noma ukupakisha okucacisiwe. Umshini wokulebula uyingxenye ebalulekile yokupakisha kwanamuhla.
Umshini wokufaka ilebula othomathikhi ulungele ukufakwa ilebula noma ifilimu lokuzinamathisela ebusweni bezinto ezahlukahlukene, ezinjengezincwadi, amafolda, amabhokisi, amabhokisi, njll. esetshenziswa kabanzi ekubekweni kwemikhiqizo emikhulu, ukufaka ilebula lezinto eziyizicaba ezinokucaciswa okuningana.
Ifanelekile ukufaka ilebula ezintweni ezahlukahlukene ze-cylindrical namabhodlela amancane we-taper round, njenge-xylitol, amabhodlela azungezile ezimonyo, amabhodlela ewayini, njll. Ingabona ilebula eligcwele lombuthano / isigamu sendingilizi, indingilizi ngaphambili nangemuva kophawu, kanye nesikhala esiphakathi ngaphambili nangemuva amalebuli angalungiswa ngokuzithandela. Isetshenziswa kabanzi ezimbonini zokudla, izimonyo, amakhemikhali, ezemithi kanye nezinye.
Umshini Wokuxhuma Okuzenzakalelayo webhodlela letiye eliyibhodlela
Umshini wokufaka ilebula wamabhodlela wokuzenzakalela othomathikhi ngokuphelele, ungafinyelela ukubeka ilebuli okuzenzakalelayo kokuma, indinganiso eyodwa, indinganiso ephindwe kabili, ukulungiswa kwesikhawu sebanga. Lo mshini ulungele amabhodlela e-PET, amabhodlela wensimbi, amabhodlela engilazi njll Kusetshenziswa kabanzi ekudleni, ekuphuzeni, ezimbonini zezimonyo.